Nzọụkwụ iri na abụọ iji wulite mkpa maka ụlọ ọrụ ọhụrụ gị | Martech Zone
Izu gara aga bụ izu dị ịtụnanya na Social Media Ahịa Worldwa ebe m kwuru okwu banyere Marketing ahịa. Ọ bụ ezie na ndị na-ege ntị na-abụkarị ụlọ ọrụ na-achọ ndụmọdụ maka otu esi etinye n'ọrụ na atụmatụ nke ọma, alaghachiri m n'ụlọ wee nwee ezigbo ajụjụ n'aka otu n'ime ndị bịara ya na-achọsi ike etu m siri wuo mmetụta zuru oke ma chọọ ịmalite ụlọ ọrụ nke m.
Achọrọ m ịma ka m ga - esi nweta ndị ahịa (na - akwụ ụgwọ) maka m inye ndụmọdụ na nkuzi… site na nyocha ihe ha nwere ugbu a, wee nye atụmatụ, azịza, ndụmọdụ na omume kacha mma. Amaara m na ịde blọgụ, akwụkwọ, e-akwụkwọ, webinars, na vidiyo bụ ebe dị mma ịmalite. Ebee ka m bidoro ịbụ onye naanị m ma olee otu m ga-esi mee ka azụmahịa m too nke ọma ka m nwee ike ịme ya oge niile?
Ya mere, gịnị ka m mere ịmalite ụlọ ọrụ m na kedu ka m ga-esi mee ya ọzọ?
Netwọk gị - Azụmaahịa gị adabereghị na akara Klout gị, ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ gị, ma ọ bụ ọkwa ọchụchọ gị. Na mmechi, azụmaahịa gị ga-aga nke ọma dabere na ntinye ego ị na-abawanye ma mepụta mmekọrịta onwe gị na netwọkụ anụ ahụ gị. Nke ahụ apụtaghị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya enweghị isi, ọ pụtara na mmekọrịta mmadụ na ibe ya agaghị adị mkpa ruo mgbe ị ga - ejikọrịrị ya na ndị nọ na nsọtụ ọzọ nke keyboard.
Niche Blog - onye ọ bụla na-ekwu okwu banyere mgbasa ozi n'ịntanetị n'oge m malitere blọgụ m, mana ọ nweghị onye na-ekwu okwu kpọmkwem banyere azịza dị iji nyere ndị ahịa aka. Nke ahụ bụ n'ezie ịhụnanya m ... na-arụ ọrụ na ngwanrọ dị ka ọrụ ụlọ ọrụ na ịgagharị na forntanetị maka ihe na-esote, abụrụla m goto tool guy maka netwọkụ m. Enweghị blog ọzọ n’ebe ahụ ka m wee malite nke m. Ọ bụrụ na m nwere ike ime ya ọzọ, M ga-aga n'ihu na isiokwu m, ọdịdị ala, ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-elekwasị anya.
Obodo - Agara m eleta, kwuo okwu, kwalite, kekọrịta ma nye ndị isi ndị ọzọ na obodo nzaghachi. Mgbe ụfọdụ, mụ na ha nwere mkparịta ụka, mana m na-elekwasị anya mgbe niile ịba uru na ọnụnọ ha ka m na-akpọ aha m ebe ahụ. Greatzọ dị mma iji mee nke a n'oge a na-amalite pọdkastị ma gbaa ndị isi na ụlọ ọrụ ahụ ajụjụ ọnụ ịchọrọ ịrụ ọrụ ma ọ bụ maka.
Na-ekwu - Dijitalụ dijitalụ ezughị (iku ume!) Yabụ ị ga-aga pịa anụ ahụ. Ewepụtara m onwe m ikwu n’ebe niile n’obodo anyị nakwa n’obodo m. Anọgidere m na-emeziwanye nkà m na-ekwu okwu, nkà ide ihe (ị nwere ike ịrụ ụka na nke a) yana nka m ji ezi ihe. Mgbe m kwuru okwu na mmemme, enwetara m ọtụtụ ụzọ karịa ịde blọgụ. Agbanyeghị, ọ dị m mkpa ịde blọgụ iji nweta ohere ikwu okwu yabụ ọ bụghị nke ọzọ. Oge ọ bụla m kwuru okwu, m na-eme nke ọma karịa oge ikpeazụ. Gwa mmadu niile okwu!
Icheta - Enwere ụlọ ọrụ iri na abụọ m chọrọ ka mụ na ha rụọ ọrụ, amakwaara m ndị ha bụ, ndị m kwesịrị izute, m wee zụlite atụmatụ etu m ga-esi zute ha. Mgbe ụfọdụ ọ na-esite n'aka onye ọrụ ibe m nwere njikọ na LinkedIn, mgbe ụfọdụ a na m ajụ ha ozugbo maka kọfị, n'oge ndị ọzọ ana m ajụ ka m gbaa ha ajụjụ maka pọdkastị anyị ma ọ bụ kpọọ ha ka ha degara ndị na-ege anyị ntị. Agaghị m akpọ ọrịre ahụ (ikekwe ị na-agba ọsọ), mana ọ na-etinye aka na ha iji hụ ma anyị enwere ike ịkwado nzukọ ha na ntụgharị.
Inyere aka - Ebe ọ bụla m nwere ike, enyere m ndị mmadụ aka n’atụghị anya ịkwụ ụgwọ. M kwalitere ha, gwọọ ọdịnaya ma kesaa ya, nye nzaghachi, ma nye ihe niile n'efu. Have ga-echeta na mgbe m nwere ike imetụ 100,000 ndị ọbịa pụrụ iche, ndị na-ege ntị, ndị na-ekiri, ndị na-ezo, ndị na-eso ụzọ, Fans, wdg otu ọnwa… naanị 30 ma ọ bụ karịa bụ ndị na-akwụ ụgwọ n'ezie. Nke ahụ pụtara na ị ga - ewulite aha gị, nwee ụfọdụ ọmụmụ ihe ma mee ka ụfọdụ rụpụta ọrụ iji nweta ọrụ. Anyị emeela aha na gburugburu ahịa inbound, atụmatụ dị mfe, SEO dị mgbagwoju anya maka ndị nkwusa buru ibu, na ikike ọdịnaya… Ma ụfọdụ n'ime ya malitere naanị site n'inyere ndị mmadụ aka idozi ihe dara ogbi na weebụsaịtị ha.
Na-arịọ - ellinggwa onye ọ bụla ihe ị ma adịghị arụ ọrụ nke ọma mgbe ị na - ere. Mana ịjụ onye ọ bụla ebe ha chọrọ enyemaka bụ ụzọ ka mma. N'ezie, nkeji ole na ole gara aga, abịara m ụlọ ọrụ na anyị enyerela aka nke okporo ụzọ okporo ụzọ bụ 10 ugboro ihe ọ bụ 4 afọ gara aga wee gwa gị ka anyị zute ha iji hụ ebe ọzọ anyị nwere ike inye aka. Na-arịọ ọrụ. Nụ ihe atụmanya ma ọ bụ onye ahịa na-alụ ọgụ wee hụ ma ị nwere ike ịrụ ọrụ na ụfọdụ ngwọta maka ha bụ ụzọ zuru oke iji banye na ụlọ ọrụ. Bido n’obere, gosi onwe gị, mgbe ahụ ị ga - abanye miri emi na omimi.
Nkwalite Onwe Gị - Ọ bụ icky… ma ọ dị mkpa. Y’oburu n’eto gi, kekọrịta, esoro, ekwuru, ma obu ihe ozo n’amaghi - nke ahu bu ezigbo nkwado nke aka gi. Anaghị m echegharị n’ịkwalite ihe ndị ọzọ na-ekwu gbasara m. Anaghị m arụsi ọrụ ike ịrịọ onye ọ bụla ka ọ mee ya, mana ọ bụrụ na ohere dapụta ma mmadụ akwụ m mma, enwere m ike ịgwa ha ka ha tinye ya na ịntanetị.
Lee Anya - Ngalaba kwesịrị ekwesị, adreesị ozi-e na ngalaba gị (abụghị @gmail), adreesị ụlọ ọrụ, foto ndị ọkachamara, akara ngosi nke oge a, ebe nrụọrụ weebụ mara mma, kaadị azụmahịa dị iche iche… ihe ndị a niile abụghị mmefu azụmahịa. Ha niile na-emefu ahịa na ihe ịrịba ama nke ntụkwasị obi. Ọ bụrụ na m hụ adreesị gmail, echeghị m na ị dị mkpa. Ọ bụrụ na ahụghị m adreesị na akara ekwentị, amaghị m ma ị ga-azụ ahịa n'izu na-abịa. Inweta goro bu ihe kwesiri ntukwasi obi na ego obula nke elere anya na ndi ozo bu ihe kwesiri ntukwasi obi.
Dee Akwụkwọ - Ọbụlagodi na naanị ahịa ị nwetara bụ gị na mama gị, ide akwụkwọ na-egosi na ụlọ ọrụ ọ bụla ị nọ, ị nyochara ya nke ọma ma wuo usoro nke aka gị iji rụọ ọrụ na ya. Tupu m bụrụ onye edemede, enweghị m ike ịnweta oge ụbọchị site na nzukọ ụfọdụ ma ọ bụ ndị ahịa. Mgbe m bụ onye edemede, ndị mmadụ na-enye m ego ka m bịa gwa ha okwu. O yiri nzuzu, mana ọ bụ mmewere ọzọ na ị ji ọrụ gị kpọrọ ihe.
Bido azụmahịa gị - Enweghi ego zuru oke ma ọ nweghị oge ka mma ịmalite azụmaahịa karịa ugbu a. Onye ọ bụla nke na-eche maka ya na-eche na ha chọrọ nke a, chọọ nke ahụ, na-echere otu ihe, wdg. Ruo mgbe ị na-apụ n'onwe gị ma nwee mmetụta dị egwu na olulu nke afọ gị nke na-eme ka agụụ na-agụ gị ịga ichu nta - ị ga-anọ ebe ị nọ. Nwa m nwoke bidoro kọleji ma m nwụrụ mgbe m bidoro DK New Media. Izu m na-ehi ụra na tebụl m na-arụ ọrụ dị egwu iji mee ngwụcha maka ndị mmadụ… na m mụtara otu esi akwadebe nke ọma, ahịa ka mma, ire nke ọma, mechie nke ọma, ma mechaa mezuo azụmahịa m. Mgbu bụ ihe egwu dị egwu na-akpali mgbanwe.
uru - Elekwasịla anya n’ihe ị na-akwụ ma ọ bụ ego ole ị na-eme, gbado anya na uru ị na-ewetara ndị ọzọ. M na-ele ụfọdụ ndị na-eme atụmatụ na-adabere na awa ọrụ na-aga mebiri. M na-ele ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ ka ha na-ebu ego na ha na-achọ ndị ahịa ọhụụ. Ọ bụghị zuru oke, mana anyị na-elekwasị anya na uru anyị na-ewetara ndị ahịa anyị wee dezie mmefu ego nke bara uru ma baa uru maka ha. Mgbe ụfọdụ ọ na-apụta na anyị na-eme obere mgbanwe nke na-ebute ọtụtụ nnata, oge ndị ọzọ ọ na-apụta na anyị na-arụ ọdụ anyị iji dozie mmejọ anyị na-enweghị dime. Ma mgbe ndị ahịa ghọtara uru ị na-eweta, ha anaghị eche banyere ego ole ị furu ha.
N’ezie, ọ dịghị nke a na-ebu amụma ihe ịga nke ọma gị. Anyị enweela ọtụtụ afọ ma anyị enweela ọdachi - mana enwere m obi ụtọ na otu n'ime ha. Ka oge na-aga, anyị emepegoro ụdị ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ nke ọma yana ndị ọzọ anyị ga-ezo aka. You're na-aga ime ụfọdụ nnukwu ihie ụzọ - naanị mụta ma gaa n'ihu.
Banyere DK New Media
DK New Media bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhụrụ nke na-elekwasị anya na ahịa ahịa na-abanye na otu ndị ahịa na ndị ọkachamara na teknụzụ. Ha na ndi otu ndi okacha amara nke ozo di iche-iche. DK New Media nwere ebumnuche nke ịmalite na ịmegharị ọnụnọ nke ndị ahịa na ntanetị iji bulie òkè ahịa, ị na-eduga ma na-ebuli mkparịta ụka ha n'ịntanetị. DK abawanyela ahịa maka ndị ahịa ọ bụla ha soro rụọ ọrụ ma bụrụ ọkachasị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ teknụzụ azụmaahịa ebe ha nwere nnukwu ndị na-ege ntị na akwụkwọ a. DK New Media bụ mpako n'isi ụlọ ọrụ na obi nke Indianapolis.
Tags: banyere dk new mediagị n'ụlọngana-arịọịde blọgụobodoDK New Mediadouglas karrna-enyere akaesi amalite ụlọ ọrụnetworknetwọknkwalitenkwalite onweNa-ekwuịmalite ụlọ ọrụuru
Naanị maka Marketingzụ ahịa
Ana m ekele gị nke ukwuu maka iwepụta oge iji dee edemede a. Nke a bụ kpọmkwem ihe onye ọ bụla nwere azụmaahịa kwesịrị ịnụ, ọbụlagodi na mbido ha ma ọ bụ na-azụ ahịa kemgbe ọtụtụ afọ. Anyị niile nwere mgba ma chọọ ndụmọdụ banyere otu esi emezu ebumnuche anyị. Obi tọrọ m ụtọ nke ukwuu etu ị siri kwuo eziokwu ma gwaa ọgbụgba-ama gị. M ga-ekerịta isiokwu a na ndị na - agụ akwụkwọ gị.
Onyekachi nwachukwu (@igweonyechiu)
Aga m agbakwunye otu. Bụrụ ezigbo enyi. Nke ahụ bụ ihe i mere. Daalụ maka ịbụ enyi na ekele maka afọ ọzọ!
Daalụ nke ukwuu, Tim! Ebili mmiri na-arị elu, eh?
hello doug, ekele maka isiokwu a doro anya, m na-amalite ụlọ ọrụ ahịa dijitalụ m na Togo na ndụmọdụ gị bụ Ogwe ọla edo.